Tips & Tricks Archives — Page5of5— Anycall Mobile
MIUI 12 တင်ထားပြီး Control Center အသစ်မသုံးရသေးသူများအတွက်
ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်က MIUI 12 တင်ထားတဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေ၊ Redmi ဖုန်းတွေအတွက် iOS ပုံစံ Control Center အသစ်ပြောင်းနည်းလေး ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထင်တာက MIUI 12 တင်လိုက်တာနဲ့…
iPhone Battery Saving Mode ဖွင့်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ?
အက်ကွဲကြောင်း သေးသေးလေးက သင်္ဘောကြီး တစ်စင်းလုံးကို နစ်မြုပ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခုပြောပြမယ့် အချက်သေးသေးကလည်း အရမ်းလွယ်လွန်းပေမယ့် သတိမထားမိဘူးဆိုရင်တော့ Error ဖြစ်တာလား ဆိုပြီး Service ဆိုင်တွေကို ပြေးကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ သိတဲ့ Service ဆိုင် ပြမိရင်တော့…
ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်က Xiaomi, Redmi ဖုန်းတွေအတွက် Global ချိန်းထားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစက Global ပြောင်းသုံးဖို့ မတိုက်တွန်းခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ ‌Global ပြောင်းသုံးတာက ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ ဒီစာလေးကို ရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ …
ဒီနေ့မှာတော့ သိတဲ့ iPhone User တွေအတွက် အရမ်းလွယ်ကူပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီစာလေးကို ရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ iPhone / iPad တွေပေါ်မှာ Personal Hotspot ကို ရှာမတွေ့ခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ်…
Android ဖုန်းတွေမှာ System Update မလုပ်ခင် သိထားသင့်သည့် အချက်များ
ဒီအချက်လေးတွေကို သတိမထားဘဲ Android System Update လုပ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ မလိုအပ်တဲ့ Logo လည်နေတဲ့ Error မျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလို Error တွေ ဖြစ်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Update မတင်ခင်မှာ ဒီအချက်လေးတွေကို…
iPhone တွေမှာ +95 နဲ့ ဝင်လာတဲ့ SMS တွေကို PrefixPlus Software အသုံးပြု၍ ဖြေရှင်းနည်း
ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်က iPhone တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Error အသေးစားလေး အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလက်ရှိကိုင်နေတဲ့ iPhone လေးက SMS ဝင်လာရင် +95 Region Code နဲ့ ပြမယ်။…
Game ဆော့နေရင်း Video Call ပြောနိုင်တဲ့ MIUI 12 ရဲ့ Floating Window Feature အကြောင်း
ဒီနေ့မှာတော့ MIUI 12 ရဲ့ အမိုက်စား Feature တွေ အများကြီး ရှိတဲ့အထဲက အကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး Feature လေးတစ်ခုကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Floating Window Feature လေးက တခြား…
Google Play Store ၊ App Store တွေမှာ မရှိတော့တဲ့ Fortnite Game ကို ဘယ်လို Install လုပ်မလဲ??
မနေ့ကတုန်းက Google နဲ့ Apple တို့ဟာ Fortnite ကို သူ့တို့ရဲ့ App Stores ထဲကနေ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလို ထုတ်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ Epic Games အနေနဲ့ In-game Payment Methods…
MIUI 12 တင်ပြီးသွားပြီဆို အရမ်းမိုက်တဲ့ ဒီ Feature လေးရော သုံးကြည့်ပြီးသွားပြီလား?
ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်က MIUI 12 မှာ Original ပါလာတဲ့ AI Sky Replacement Filter ဆိုတဲ့ Feature လေးအကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Feature လေးက အရမ်းလန်းတဲ့ပုံလေးတွေရဖို့ အရင်လို Photoshop Software…
Facebook Post အဟောင်းတွေကိုဘယ်လို ဖျက်မလဲ??
Facebook ထဲမှာ Memories တွေတက်လာတော့ အရင်ကကျွန်တော်တို့ တင်ခဲ့တဲ့ ကြောင်တောင်တောင် Post တွေကို ပြန်ဖျက်ချင်မိတယ်ဟုတ် ?? ဖျက်ချင်မိပေမယ့်လည်း ဒီ Posts တွေတော်တော်များများကို Profile ထဲကနေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျက်နေရတာ တော်တော်လေး အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ …
Redmi Note 8 Pro အတွက် အမေးအများဆုံး မေးခွန်းများ
ကျွန်တော် ဒီနေ့မှာတော့ Redmi Note 8 Pro User တွေ အမေးအများဆုံး မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Redmi Note 8 Pro တွေမှာ Stable ကနေ Global…
Error ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်စရာ မလိုတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Original Hidden Feature အကြောင်း
ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်က Xiaomi User တွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်ပြီး အမေ့ခံဖြစ်နေတဲ့ feature လေး တစ်ခုအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ feature လေးရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Privacy ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီရိုတွေအပြင် တခြား Audio သီချင်းတွေ…
Mi ဖုန်းတွေမှာ Google Apps တွေ အလုပ်မလုပ်ခဲ့ရင် ?
ကျွန်တော်တို့ဟာ တရုတ်ပြည်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ China version ဖုန်းလေးတွေကို ပိုမိုသက်သာတဲ့ စျေးနှုန်းကြောင့်ရော၊ ဝယ်ယူရလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရော ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယခင်က ဒီလိုသက်သာတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ ဒီလို specifications တွေပါတဲ့ဖုန်းတွေကို ကျွန်တော်တို့မမြင်ဖူး မကြားဖူးခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် “ပေါချောင်ကောင်းပဲကွာ” ဆိုပြီးဝယ်ကြပါတယ်… လက်ထဲရောက်လာပြီးတော့မှ…
Mi ဖုန်းသုံးသူတွေတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ Mi Cloud အကြောင်း
သင့်ရဲ့ ဖုန်းပျောက်သွားပြီဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ အရင်ဆုံးသိချင်မယ့်ကိစ္စကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ ? ကျွန်တော်မှန်းတာမမှားဘူးဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါက သင့်ဖုန်းလက်ရှိရောက်နေတဲ့ တည်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်… သင့်အနေနဲ့ အဲ့ဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ကြည့်တာတို့ စာပို့ကြည့်တာတို့ လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ပေမယ့် သင့်ဖုန်းက ရိုးရိုးသားသား တနေရာမှာကျန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဖုန်းခေါ်လို့ရမှာလဲ မဟုတ်သလို စာပို့လို့အဆင်ပြေမှာလဲ…
သင့်ဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီအခြေအနေ (Battery Health) ကို ဘယ်လို စမ်းသပ် စစ်ဆေးမလဲ?
Unicode Version ဘက်ထရီ အခြေအနေ (Battery Health) ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းမှာ ကင်မရာ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေပါစေ၊ စွမ်းဆောင်ရည် ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေပါစေ၊ လျှင်မြန်မှု…